AdPushup: Xakamee oo Hagaaji Naqshadahaaga Xayeysiinta | Martech Zone
Axad, Oktoobar 23, 2016 Axad, Oktoobar 23, 2016 Douglas Karr
Madbacad ahaan, mid ka mid ah go'aamada ugu adag ee lacag ku helida bartaada ayaa ah isu dheelitirka dakhliyada sii kordhaya ama baabi'inta khibradaada isticmaale. Waxaan la halganeynaa isku dheelitirnaanta sidoo kale - oo lagu darayo xayeysiisyo firfircoon oo bartilmaameed ah oo la xiriira adeegsadaha. Rajadeennu waa in xayeysiisyadeennu ay sii ballaadhiyaan waxa ku jira iyaga oo siinaya alaab ama adeegyo waxtar yeelan kara.
Khasaaraha, dabcan, ayaa ah in booqdayaasha boggu ay bilaabaan inay si fudud u iska indhatiraan xayeysiiska. AdPushup, nidaam lagu xakameeyo laguna hagaajiyo naqshadahaaga xayeysiiska ah, ayaa tan loogu yeeraa indho la’aanta calanka. AdPushup si habsami leh ayuu ula midoobaa boggaaga wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad u abuurto goobo dheeraad ah xayeysiiskaaga, oo ay ku jiraan waxyaabaha ku jira.
AdPushup waxay siisaa barxad awood kuu siineysa inaad hagaajiso cabbirka, midabka, nooca iyo meeleynta xayeysiimahaaga jira. Nidaamku wuxuu adeegsadaa barashada mashiinka si loo yareeyo baahida loo qabo faragelinta aadanaha iyo waqtiga go'an, iyadoo la wanaajinayo meeleynta xayeysiinta si loo kordhiyo dakhliga.
Astaamaha AdPushup waxaa ka mid ah:
Iswaafajinta Layout Ad - Abuur tijaabooyinka qaabeynta xayeysiiska oo si toos ah u hagaaji cabbirka xayeysiiska, meeleynta, noocyada, iyo midabada.
Teknoolojiyadda Gawaarida Gawaarida Gawaarida - Iskuduwaha ku-habboonaanta gawaarida ee gudaha iyo si caqli-gal ah u geliya xayeysiiska mawduucaaga adiga oo aan saameyn ku yeelan UX.
Maareynta Xayeysiiska Muuqaalka - Adeegso tifaftiraha muuqaalka-iyo-xulo si aad uxakameyso waxyaabo badan oo xayeysiis ah oo aad u dejiso tijaabooyin adigoon codeyn.
Iskudhinta Khibrada Isticmaalaha - Kordhi dakhliga adigoon wax u dhimin khibrada booqdayaasha websaydhkaaga ama wax ka badalin qaabkeeda qaabeynta.
Mashiinka Iskuduwaha ee Iskuduwida - Barashada mashiinka ayaa nidaamka u saamaxeysa inuu barto oo uu la qabsado naftiisa si uu u badalo dabeecada martida si uu u muujiyo qaabka ugu haboon ee xayeysiinta u soo jiita dareenka.
Qeybinta iyo Shakhsiyeynta - Si otomaatig ah u abuuro dhagaystayaasha iyo qaybaha si loo shakhsiyeeyo naqshadaha xayeysiiska si loo wanaajiyo khibrada martida.
Falanqaynta iyo Warbixinta - La soco waxqabadka koontadaada adoo raacaya natiijooyinka si qoto dheer Analytics, iyo warbixinno caadiya.
Iskudhinta Bixinta Xayeysiinta - Xayeysiisyadu waxay helayaan hillaac degdeg ah iyada oo loo marayo shabakadeena gaarsiinta qaabeynta qaab-dhismeedka gudbinta ee Geo-qaybiyay taas oo culeyska ugu yar saareysa adeegahaaga.
Isku-darka Google AdSense / AdX - Is-dhexgalka aan xuduud lahayn oo leh Most Google iyo DoubleClick Ad Exchange (AdX) oo kuu ogolaanaya inaad ku bilowdo hal guji.
U hogaansanaanta Siyaasadda Google AdSense - Xayeysiimahaaga la hagaajiyay waxaa laguugu soo gudbinayaa shabakad gaarsiinta qaabeynta qaabeynta qaab-dhismeedka Geo-qaybiyay oo culeyska ugu yar ka dhigaya server-yadaada.
Waxaa laga yaabaa in waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan AdPushup ayaa ah in qiimeyntu ay ku saleysan tahay wadaag dakhli oo leh ballanqaadyo ugu yar.
Tags: hagaajinta gaarsiinta xayeysiiskaqaabeynta xayeysiiskahagaajinta qaabeynta xayeysiiskaka warbixinta qaabkahagaajinta xayeysiintaxayeysiisadxmaamulka xayeysiinta bannerbanner warbixintaxayeysiinta bannerhagaajinta bannershaqsi bannerkala saarida bannerLaba-gujigoogle AdSenseU hogaansanaanta Siyaasadda Google AdSensekhibrad u yeelashada isticmaalahamaaraynta xayeysiiska muuqaalka ah
Himilada6: Xal La Gaarsiin Karo, La Beddeli Karo, Isniinta Isniinta Suuqgeynta Ganacsiga